Izinto ezi-4 okufanele uzikhumbule lapho wenza i-Fashion Photography - I-LucidPix
Ngabe ufuna ukungena ezithombeni zemfashini? Isikhathi esiphelele. Imithombo yezokuxhumana isibe yikhaya hhayi nje lemikhiqizo emikhulu efana H & M futhi phakade 21, kodwa ezincane futhi, ngisho abathonya abasetshenziselwa ukukhuthaza le mikhiqizo! Isidingo sikhona, ngakho-ke manje yisikhathi esingcono kunanini ngaphambili sokufunda ukuthi ungazithatha kanjani izithombe zemfashini njengochwepheshe.
Kodwa-ke, ukuthathwa kwezithombe zemfashini akugcini ngokuthatha izithombe zezingubo, izici ezifanayo zokuthwebula izithombe zisasebenza, kunemithetho embalwa eyengeziwe. Nazi izinto ezi-4 okufanele uzikhumbule ngaphambi, phakathi nangemva kokuthwebula izithombe zemfashini.
Ngaphambi kokuthi i-photoshoot yakho yenzeke empeleni, kufanele uzizwe ngomkhiqizo. Imibuzo emithathu okufanele uzibuze yona yile:
Buyini ubuhle benkampani?
Siyini isiqubulo senkampani?
Bathengisa hlobo luni lwezingubo?
Ngokwazi ubuhle bakho, ungahlela indawo okuyo. Ama-motto akwazisa ukuthi inkampani yakho imeleni nomyalezo abafisa ukuwudlulisa ngezithombe zakho. Futhi ukwazi ukuthi yiziphi izingubo ozozithatha izithombe kukunikeza umbono wokuthi yimaphi ama-engeli nemibala okufanele ngabe uyifunayo.
Izimpendulo zabo kule mibuzo kufanele zikunikeze umbono ojwayelekile wokuthi iklayenti lakho lifunani maqondana nombono, umyalezo netimu, okukuvumela ukuthi uhlele isithombe sakho ngokufanele.
Khetha indawo efanelekile
Okulandelayo, hlela indawo okuyo. Lokhu kuthanda ukukhohlisa kancane ngokuya ngokuthi uhlala kuphi kepha cabanga ngokuzungezile endaweni okuyo. Uma ushutha uhlobo lomdlalo, zama ukufuna amapaki noma amathrekhi aseduze. Uma ushutha uhlobo lomkhiqizo olugxile ekugqokeni umsebenzi, funa isikhala sehhovisi ongadubula kuso.
Iphuzu ukuthi, ufuna ukuthi izifundo zakho zibukeke zemvelo endaweni yazo. Umkhiqizo owuthathelayo ufuna izingubo zawo zibukeke zizinhle kubantu, ngakho-ke beka amamodeli akho endaweni lapho izingubo zabo zingena khona.
Yazi isihloko sakho, bese usibeka maphakathi naso
Ngenkathi lokhu kuncike kwiklayenti lakho, ukuthwebula izithombe zemfashini kuvame ukuthi kudinga ukuthi ingubo ibe ngukugxila kwesithombe sakho. Lokhu kusho ukuthi kufanele ubeke amamodeli akho ezikhundleni ezingeke ziphazamise ingubo kepha ziyigqamise. Khetha ukuma okulula okugcina ukugqokwa kwengubo.
Enye into ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi kufanele unamathele ekushotsheni okugcwele komzimba! Iphutha elijwayelekile elenziwa ngabantu ukugxila kumodeli yabo ngokweqile nokusika izingxenye zengubo. Ukugwema lokhu, qiniseka ukuzikhumbuza ukuthi ukugxila kwalesi sithombe kuyimfashini, hhayi imodeli.
Njengokulingayo njengokudala ngobuciko bakho, musa ukususa ukugxila esihlokweni sakho. Namathela ekuhlelweni okulula njengama-retouches nokulungiswa kombala. Uma ufuna ukudala okudala, zama ukuhlela okugqamisa ingubo yakho.
Enye indlela yokwenza ubuciko ukwenza isithombe sakho ukusebenzisa Izinhlelo zokusebenza zezithombe ze-3D ukuletha ingubo yakho phambili, ngokoqobo! Izinhlelo zokusebenza ezifana I-LucidPix izothatha isithombe se-2D futhi yenze i-3D ngompompi owodwa nosizo lwe AI, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi izingubo zakho zizogqama. Ngaphezu kwalokho, ungayithumela ngendlela yamavidiyo noma Ama-GIF, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi uzokwazi ukuthumela isithombe sakho se-3D noma yikuphi futhi uthathe ukunakwa kwabaningi!
Imfashini Photography - Ekuphetheni
Njengomhlaba wemfashini kwandisa ubukhona bayo ezinkundleni zokuxhumana, isidingo sokuqukethwe okuhlobene nemfashini sizokhula nakho. Ukugcina lezi zinto ezi-4 engqondweni kuzoheha ukunakwa kwemikhiqizo eminingi ngoba bayazi ukuthi ingubo yabo izokhanya ezithombeni zakho!
Amathiphu ama-5 Wokwenza I-Baby Best Photography →← I-7 Self Portrait Photography Imibono Ongayenza Ngesikhathi Sokuhlukaniswa